Kedụ ka m ga-esi gbanye ụkwụ na ụlọ ọrụ Hemp Interstate? | Mbupu hemp
Mbupu Hemp iwu
Kedụ ka m ga-esi gbanye ụkwụ na ụlọ ọrụ Hemp Interstate?
Farkpụrụ Ọrụ Ugbo 2018 gosipụtara n'ụzọ dị ukwuu maka ibubata hemp, mana nke ahụ apụtaghị na ndị mmanye iwu steeti nwere ekele maka ọdịiche dị n'etiti ibu cannabis site na nke nwere ihe karịrị 0.3% THC. Ndị mmadụ ka nọ na-ejide maka ibugharị ifuru hemp na emebie ihe n'ụzọ iwu.
esi ebufe hemp ifuru
Tinye ihe ise ndị a na ndepụta gị maka mbupu hemp interstate.
leta (ọkwa) nye ndị mmanye iwu.
nkịta ọgwụ agaghị akọ marijuana site na hemp
COA gosiputara hemp
ikike na ndebanye aha maka inwe ya
chụgara smart na nchekwa.
Anyị ga-atụle Mbupu Hemp kpuchie isi ihe dị n’elu, nke dịkwa na vidiyo. Jisie ike diri ulo oru gi Gwa a hemp ọka iwu banyere azụmahịa gị iji hụ na ọ chedoro na nsogbu njem njem.
Jiri nlezianya na-eme atụmatụ ịkwọ ụgbọ mmiri nke ụlọ ọrụ gị
Na 2019, hemp bụ gọọmenti iwu mana ọ bụghị n’enweghị iwu ọ bụla. Henweta Hemp na nhazi ya na-achọ nnabata na usoro iwu gọọmentị etiti site na mmemme Hemp Pilot gara aga, ma ọ bụ iwu steeti ọzọ na-enye ikike nchịkwa hemp. USDA nwere rue mgbe 2020 ịhapụ usoro iwu hemp ikpeazụ ya. Ahịa ahịa Hemp etobeghị nke ọma.
Oge ntuli aka nke afọ 2019 ga-abụ nke kachasị na United States n'afọ iri. Mentsgbọ elu hemp ga-abịa, na ndị mmanye iwu nwere ike ịmegharị ihe ọkụkụ maka wii wii na-ezighi ezi. Nke a bụ otu ị ga-esi nweta hemp gị na ebe ị na-aga.
Nwee Ebuba Banye na Hemp
Kpọọ atụmatụ, ma ọ bụ usoro ụlọ ọrụ, mbupụ hemp ahụ adịghị ka ibute ọka n'ihi na ndị uwe ojii anaghị ebu ibu karịrị ọka afọ 80 gara aga.
Atụmatụ gị kwesịrị ịgụnye usoro maka mbupu ụgbọ mmiri hemp na ngwugwu edepụtara iwu nke azụmahịa ahụ. Akwụkwọ ozi nye ndị na-eme iwu iwu nwere ike ịkọwa ihe gbasara iwu ọhụrụ ahụ wee zaa ajụjụ ha.
Rịba ama na Ntinye Iwu Iwu nke Hemp Shipment
Akwụkwọ ozi, ma ọ bụ ọkwa, maka ndị mmanye iwu ma ọ bụrụ na ejidere ụgbọ ala hemp ya ga-enyere aka gosi ihe kpatara ụlọ ọrụ gị na-eme ji bụrụ iwu zuru oke.
Ezi akwukwo nye ndi mmanye iwu ga:
kwuputa iwu gọọmenti etiti banyere hemp
kwuputa iwu gọọmentị etiti gbasara mbufe njem hemp
ebe iwu steeti na-akwado ọrụ nke ụlọ ọrụ gị
rụtụrụ asambodo hemp nke nyocha (COA)
kọwaa nkịta ọgwụ nwere ihe mgbaàmà nke ụgha n'ihi terpenes na hemp
nye ozi ịkpọtụrụ onye ọka iwu gị.
Nkịta Na-arugụ Ọgwụ Arụghị Nkwagharị na Hemp
isi mmalite: philosophereeds.com
Chemical na-eme ka cannabis bụrụ wii wii na-ezighi ezi bụ cannabinoid a na-akpọ Delta-9 THC, ma ọ bụ na-eme ka ọ dị mkpụmkpụ ka ọ bụrụ naanị THC. Nkịta enweghị ike ịnụ ísì mmiri ọgwụ a n’ihi na o nweghị isi. Kama, a zụrụ ndị nkịta ọgwụ ka ha esi isi maka ụfọdụ terpenoids na osisi cannabis. A terpenoids ndị a na-ahụkarị na hemp ma ọ bụ wii wii. Nke a bụ ihe kachasị a na-ahụkarị terpenes na hemp.
Terzọ ndị a bụ ihe kpatara isi na hemp, ma ọ bụ wii wii, ji nwee ụdị dịgasị iche iche. Nkịta ọgwụ na-esi ísì ụtọ maka naanị di na nwunye na-emegharị. Nkịta ọgwụ na-esi ísì ụtọ maka beta-caryophyllene. Kpọmkwem, ndị nkịta na-ahụ maka ọgwụ na-esi ísì ụtọ maka Caryophyllene oxide, nke bụ nnuku nke ihicha cannabis, n'ihi na caryophyllene bụ terpinoid kachasị.
Ndị nkịta na-arugụ ọgwụ na-anụkwa isi maka Pinene, ma ọ bụ nke na-egbu ya, n'ihi otú pinene si dị na cannabis yana mgbe jikọtara ya na caryophyllene, nsonaazụ na-abụkarị cannabis - mana cannabis na-agụnyekwa hemp.
Nwere Asambodo Nnyocha na mpgbọ Hemp
Asambodo Nyocha (COA) bu nkwa nke ndi nlere anya hu ihe di n’ime hemp nwalere. Steeti na-akwadokarị ụlọ ọrụ nnwale ha na-eme maka nyocha nke hemp nke ụlọ ọrụ ka gọọmentị wee ghara ịnwekwu ndị ọrụ. Companieslọ ọrụ ndị na-anwale ule cannabis, ma ọ bụ hemp ma ọ bụ wii wii, ma na-enye COA banyere ihe dị na ya. Niile na profaịlụ kemịkal nke Ekwesịrị inye osisi cannabis na COA, mana ebe a bụ isi ihe ha kwesịrị ịgụnye:
Thatlọ ọrụ rụrụ nyocha ụlọ nyocha
Lablọ nyocha ahụ bụ ụlọ ọrụ nke atọ sitere n'aka onye na-akụ ọrụ
profaịlụ cannabinoid nke hemp
profaịlụ terpene (akara ego)
Nnyocha Mpempe Nnukwu
Nchọpụta ọgwụ na-egbu egbu
Shippingbufe hemp nke ọma na-achọ ịnweta COA nke ndị ọzọ nwere onwe ya na obere ụgbọ mmiri hemp n'onwe ya. Akwụkwọ ozi ndị mmanye iwu kwesịrị ịgụnye COA dị ka ihe ngosi iji mekwuo ọzụzụ na dozie ọgba aghara ọ bụla iji belata ohere nke ibupu hemp gị.
Kwadebe Ọwara ppinggbọfe Hemp Gị
Nke a bụ ihe sitere na vidiyo a na-enye gị maapụ na agba iji hụ ihe na-ekwu na-enye ohere maka hemp na ndị chọrọ anaghị.
HEMP IPMIPMIPME EGO.
Cheta, ọtụtụ na-ejide anaghị eme na Idaho, ma ọ bụ Iowa, ma ọ bụ steeti na-abụghị hemp. Ọbụna steeti ga-agbaso iwu hemp dị mgbagwoju anya agbadoro mmanye iwu ma rụpụta njide na-enweghị isi. Ihe niile mere ị ga - eji nwee atụmatụ, detuo faịlụ njem gị, yana ..
mbufe hemp abụghị ihe ize ndụ n'efu
Gbọala Smart & Nchekwa Mgbe Mbugharị Hemp
Nke a n’enweghi nkwupụta, mana a ka na-ekwu. Nwee ezigbo ọkwọ ụgbọ ala. Lelee maka akara ntụgharị na ọkụ ọdụ. Zere ohere ọ bụla na-enweghị isi nke ịdọrọ - ma ọ bụ banye na ihe mberede. Edekwala ihe na ụgbọala. Aụla ịnya ụgbọ ala. Akwọkwala na ikikere emebiela… na ndị ọzọ. Mara Smart mgbe mbufe mbugharị ya.
Jisie ike na-eto ihe ubi ohuru ohuru.
Kpọọ ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ka gị na ndị ọka iwu gị kwụọ maka ịgbacha ọsọ. Ekele ma nweere onwe gi ịkekọrịta nke a ma ọ bụrụ na ị nwetara uru site na ya.